Enjoy the most pleasant weather of the year of Myanmar with some of the wonderful activities happening in the estate. This month we are celebrating the season of festivities and love with our residents and friends at the estate. Find out about some of the great activities and promotions on offer here: https://www.punhlaingestate.com/events-calendar
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံးသောလရာသီဥတုဖြစ်တဲ့ ဆောင်းရာသီလေးမှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်တွေကို အိမ်ရာဝင်းအတွင်းမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်လို့ ပါဝင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားလိုက်တော့နော်။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အခမ်းအနားတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလလေးကို အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူတွေ၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းသွားကြရအောင်။ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းက အစီအစဉ်တွေနဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေကို https://www.punhlaingestate.com/events-calendar မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
CELEBRATE CULTURE "HAPPY CHINESE NEW YEAR'
To celebrate the Happy Chinese New Year of the OX 2021, we are pleased to invitearenowned Chinese Lion Dance troupe to perform with2Lions in the Estate. The Lion Dance troupe will perform around the Estate offices to bring good luck and happiness to our entire community including you and your family on Fri 5th Feb between 1:00pm to 4:00pm.
Contact us at +95 (9) 955400911, +95 (1) 3684030 or Ext:1461 by Fri 29th Jan if you would like to invite the Lion Dance team to your own residence to perform. Each session of Lion Dance will be Ks. 80,000 and additional gratuity at residents' discretion.
၂၀၂၁ တရုတ်နှစ်သစ်ကူး ( နွားနှစ် ) ကို နာမည်ကျော် Chinese Lion Dance အက အဖွဲ့ကို ခေါ်ယူပြီး အိမ်ရာဝင်းအတွင်းမှာ ခြင်္သေ့ ၂ ကောင်နဲ့အတူ ဖျော်ဖြေဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်ကြသူများနှင့် ပန်းလှိုင်မိသားစုအတွက် နှစ်သစ်မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေ၊ ပျော်ရွှင်မှုတွေဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်ဖို့အတွက် Lion Dance အကအဖွဲ့က ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်၊ သောကြာနေ့မှာ အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးရုံးမှာ နေ့လည် ၁ နာရီကနေ ညနေ ၄ နာရီအထိ လှည့်လည်ဖျော်ဖြေမှုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့နေအိမ်မှာ Lion Dance အကအဖွဲ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုကို ကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင် ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့ကို နောက်ဆုံးထားပြီး +95 (9) 955400911, +95 (1) 3684030 သို့မဟုတ် Ext:1461 သို့ဆက်သွယ်လိုက်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ပွဲအတွက် မြန်မာငွေ 80,000 ကျပ်ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပြီး အပိုဆောင်းဆုကြေးငွေကိုလည်း မိမိတို့စိတ်တိုင်းကျချီးမြှင့်နိုင်ပါတယ်။
WHAT'S ON VALENTINE'S DAY
There are so many things to see and do in the Estate in this Valentine’s season. Find love in our February Romance newsletter with your favourite picks from our variety of romantic indoor and outdoor date options.
ချစ်သူများနေ့မှာ အမှတ်တရတွေဖန်တီးနိုင်ဖို့ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းမှာ အစီအစဉ်တွေအများကြီးရှိလို့နေပါတယ်။ ဖေဖော်ဝါရီလသတင်းစာစောင်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ ချစ်သူများနေ့အစီအစဥ်လေးတွေထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်ပြီး ချစ်ရသူနဲ့အတူတူ အမှတ်တရနေ့ရက်လေးကိုကုန်ဆုံးလိုက်နော်။
A SURPRISE ROMANTIC PORTRAIT
The lush green estate and newly renovated Club Lounge is the perfect backdrop foradestination pre-wedding oraromantic portrait photo shoot. Contact us at corporatemarketing@yomaland.com for more info.
ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာရှိတဲ့ စိမ်းစိုပြီး တိတ်ဆိတ်သာယာလှပတဲ့ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာနှင့် Club Lounge က pre-wedding ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်သူတွေ၊ အမှတ်တရအချစ်ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ချင်သူတွေ အတွက် နေရာကောင်းလေးတစ်ခုဖြစ်မှာ အသေအချာပဲနော်။ အသေးစိတ်ကို corporatemarketing@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Create your own spa holidays in relaxing and personal atmosphere with your loved one. For more information and membership, contact countryclub@memoriesgroup.com or call +95 (1) 687664 for more info.
ချစ်ရသူနဲ့အတူတူ တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးမှာ spa နေ့လေးဖန်တီးလိုက်ပါ။ အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပါဝင်လိုလျှင်ဖြစ်စေ countryclub@memoriesgroup.com သို့မဟုတ် +95 (1) 687664 သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
You don’t need to go far to haveafun and romantic Valentine’s Day. Create an evening of beautiful memories this February 14th with an exquisite dinner at our restaurants enjoyed in the romantic surroundings. Book your table now.
ချစ်သူများနေ့လေးကို အမှတ်တရဖြစ်စေဖို့အတွက် ရှည်ရှည်ဝေးဝေးတွေးနေစရာမလိုတော့ဘူးနော်။ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့အမှတ်တရနေ့ရက်လေးကိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင် အိမ်ရာဝင်းထဲမှာ ရွေးချယ်စရာစားသောက်ဆိုင်တွေအများကြီးရှိလို့နေပါပြီ။ ကြည်နူးဖွယ်ရာ ညစာစားပွဲလေးကို ချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူတူ ကျင်းပလိုက်ပါ။ ဘိုကင်ပြုလုပ်လိုပါက :
Oasis Bistro: countryclub@memoriesgroup.com or call +95 (1) 687664
Bamboo House: suumyatkhin@yomaland.com or call +95 (9) 760112102
Prefer to enjoyacozy home-cooked meal instead? Cook his/her favourite meal along with our great selection of wines from Country Store.
ချစ်သူများနေ့ကို အေးအေးဆေးဆေးပဲ အိမ်မှာဟင်းအတူတူချက်စားပြီး ဖြတ်သန်းမယ့် စုံတွဲတွေအတွက်လည်း ဟင်းပွဲနဲ့လိုက်ဖက်ညီစေမယ့် အကောင်းဆုံးဝိုင်တွေ Country Store မှာ ရှိလို့နေပါတယ်။
Keep your little ones entertained with cute and easy Valentine’s cupcake decorating class. We are sure your kids will love.
သားသားမီးမီးတို့အတွက်လည်း ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ပြုလုပ်ရလွယ်ကူတဲ့ cupcake လေးတွေကို ဖန်တီးဖို့ cupcake class လေးရှိလို့နေပါပြီ။
10:00am -11:00am or 11:00am - 12:00nn
Ks. 7,000 per kid
@ Bamboo House
Contact: +95 (9) 954776846 | +95 (9) 760112102
Take advantage of bright and cheerful weather and plan an outdoor activity cater to your adventurous side.
Bookashort biking trip out of town, contact: +95 (9) 5342939 | +95 (9) 25405 2298
သာယာတဲ့ ရာသီဥတုလေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး သင့်စိတ်ကြိုက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ အစီအစဉ်လေးကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
မြို့ပြရဲ့ မွန်းကျပ်မှုတွေကနေ ဝေးကွာတဲ့နေရာလေးမှာ စက်ဘီးစီးရင်းအပန်းဖြေလိုပါက +95 (9) 5342939 | +95 (9) 25405 2298 သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
DISCOVER YOUR SANCTUARY AT PUN HLAING ESTATE
Rose Garden Villas are designed for active, social family living with plenty of space for entertaining with spacious family room, three bedrooms and an ensuite. These properties have fenced yards and spacious, manicured gardens with panoramic views facing the canal. An upstairs family room and big, bright windows bathe these 4,320 sq.ft. homes in natural light. Featuringalandscaped garden area where you can enjoy outdoor lifestyle, from an evening barbecue with your family or friends to relaxing afteraday’s work around of golf. Bonus: Management fee included in rental fee.
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာအတွင်းမှာရှိတဲ့ အိပ်ခန်း3ခန်းပါရှိတဲ့ Rose Garden Villa ကိုဌားရမ်းလိုပါက
Rose Garden Villa အကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Link လေးထဲဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
NB: Leasing Gallery is opened, by appointment only, on Fri 12th Feb from 9:00am - 5:00pm.
WHAT LUXURY HOME SEEKER ARE LOOKING FOR IN 2021
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများအတွက် အထူးအခွင့်အရေး။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက် အိမ်တစ်လုံးထပ်မံဝယ်ယူဖို့ စဉ်းစားနေပြီဆိုရင် +95 (9) 777229449 သို့ဆက်သွယ်လိုက်တော့နော်။
NB: Sales Gallery operates as usual on Fri 12th Feb from 9:00am - 5:00pm.
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အိမ်လေးအမြဲတမ်းတောက်ပြောင်သန့်ရှင်းလှပနေဖို့ဆိုရင် ပန်းလှိုင်အိမ်ရာက အိမ်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုလေးကို သတိရလိုက်ပါ။
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေအတိုင်း စိတ်တိုင်းကျ သန့်ရှင်းတောက်ပြောင်သွားအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိလို့နေပါတယ်။ Ext နံပတ်0ကို ခေါ်ယူပြီး ဝန်ဆောင်မှုရယူရန်အတွက် ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
FEBRUARY RESIDENT'S FEATURE
Jason Brown, barista & coffee owner shares the secret of brewing the best coffee.
"Don’t brew with boiling water, let it cool foraminute first. If you haveathermometer, you are looking for around 92-96°C. Grind size is crucial, you must get this right for the type of coffee that you are brewing. If you haveaFrench press, or filter, choose Sawbwa’s ‘course ground’, or even better choose beans and grind fresh at home (makesahuge difference to how long your coffee will last once the bag is open). Check Google for grind size charts, when I started learning about coffee, I was amazed at how much difference this makes to the flavours that you can achieve in the final cup."
Sawbwa Coffee ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Jason Brown မှ အကောင်းဆုံးကော်ဖီကို ရရှိဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး ဖျော်ရလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးထားပါတယ်။
"ရေနွေးပူပူကြီးမှာမဖျော်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ခဏလောက်အေးအောင်စောင့်ပြီးမှာ ဖျော်တာအကောင်းဆုံးပါ။ သာမိုမီတာရှိတယ်ဆိုရင် 92-96°C လောက်ဆို ဖျော်လို့ရပါပြီ။ ကြိတ်ထားတဲ့ ကော်ဖီစေ့ကလည်း ဖျော်မယ့် ကော်ဖီအမျိုးအစားအပေါ်လိုက်ပြီး အရေးပါပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ French press (ဒါမှမဟုတ်) filter လိုဟာမျိုးရှိတယ်ဆိုရင် Sawbwa ရဲ့ course ground ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကော်ဖီစေ့ကိုပဲဝယ်ပြီး အိမ်မှာလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြိတ်လို့လည်းရပါတယ်။ (ဒါပေမဲ့ ကော်ဖီအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးဘယ်လောက်အထိအထားခံလဲဆိုတာက ကြီးမားတဲ့ ခြားနားမှုကို ဖြစ်စေမှာ အသေအချာပါပဲ)။ ကော်ဖီစေ့အရွယ်အစားကို Google မှာ ရှာပြီးလေ့လာကြည့်ပါ။ ကျွန်တော် ကော်ဖီအကြောင်းစပြီးလေ့လာတုန်းကဆို အရွယ်အစားကွာခြားမှုက နောက်ဆုံးခွက်ထဲက ရမယ့်အရသာမှာသွားပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီး ရှိတယ်ဆိုတာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် အင်မတန်ပဲ အံ့ဩခဲ့ရတယ်။
Kipling ပုံစံနဲ့အလည်ထွက်ဖို့ စီစဉ်နေပြီလား? အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေရရှိဖို့ အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို Awei Metta Reception သို့မဟုတ် Memories Travel တို့ကို ဖုန်းနံပတ် 09-254052298 သို့ဆက်သွယ်ပြီး စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
See you in March! If you would like to contribute any article or share your feedback with us, please send corporatemarketing@yomaland.com your thoughts and suggestions.
မတ်လမှာ ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ ပန်းလှိုင်သတင်းစာစောင်မှာ ဆောင်းပါးထည့်သွင်းလိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ အကြံဥာဏ်များပေးပို့လိုလျှင်ဖြစ်စေ corporatemarketing@yomaland.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။